Warshadda dhuxusha birta ee kaarboon ee alaabta tuubooyinka biyaha ee dhismaha ah Mingshuo
Soo -saarista Hordhaca 500kw IGBT welder state hf adag
1. Golaha hagaajinta
2. transformer transformer
3. kabadhada inverter
5. Is-weydaarsiga qaboojiyaha-biyaha
Halbeegga Wax -soo -saarka (qeexidda) ee 500kw oo ah soo noqnoqoshada sare ee tuubada adag ee gobolka samaynta qalabka mashiinka alxanka
Tuubooyin kala duwan oo lagu taliyay oo lagu dhejin karo 500kw aaladaha alxanka soo noqnoqoshada sare
Dhexroor tuubo 76-160 mm
Dhumucda derbiga biibiile 2.0-6.0mm
Habka Qaboojinta U adeegso nidaamka qaboojiyaha Hawada-Biyaha si aad u qaboojiso nooca induction 500kw ee alxanka soo noqnoqda ee gobolka oo adag
Faahfaahinta halabuurka ee hal set oo ah 500kw transformer base alxanka joogtada ah
Cabinet Golaha dib-u-hagaajiyaha: oo leh shaandhayn, go'doon, nidaamka xakamaynta macquulka iyo wareegga shaandhaynta mawjadda buuxda. Xaqiiji joogtaynta iyo habsami-u-socodka korontada DC-ga, kartida fara-gelinta ee xooggan, iyo is-waafajin iyo isku-buuq la'aan. Bixinta korontada ee guddiga wareegga kontoroolka iyo guddiga qaybta korontada ayaa korsanaya korontada beddesha, taas oo hubinaysa xasilloonida nidaamka korontada iyo la qabsiga ballaaran ee danab. Danab -soo -saarka DC -ga si joogto ah ayaa loo hagaajin karaa, iyo korantada ugu badan ee DC waa 250V, taas oo si weyn u hagaajinaysa amniga hawlwadeennada.
Transform Dib -u -hagaajiye -beddel: saamiga beddelka 400V/205V.
Cabinet Golaha kabadalka: Wareegga oscillating LC oo ka kooban koronto -dhaliyaha iyo gariiradda inductance. Dhammaan looxyada ka kooban korontadu waxay u adeegsadaan transistor -ka sidii cutubka awoodda ee tusaalaha. Wareeggan oscillating LC wuu ka duwan yahay wareegga oscillating ee habka tuubada elektiroonigga ah. Awoodda wareegga taangiga C ayaa si toos ah ula jaanqaadeysa xarigga induction L, mana jiro wax-beddele wax-soo-saar leh, oo si weyn u yareeya khasaaraha oo hagaajiya wax-soo-saarka wax-soo-saarka (wax-ku-oolnimadu waa 25% -30% ka sarraysa kan alxanka tuubada marinka sare ee soo noqnoqda) .
Console Konsole dhexe: fudud oo ku habboon in lagu shaqeeyo.
⑤Ar- Nidaamka is-weydaarsiga biyaha: Wuxuu ka kooban yahay is-dhaafsiga kuleylka, bamka wareega, kala-sooca biyaha iyo qeybta koontaroolka korontada.
Codsiga alxanka tuubada hf
Mashiinka alxanka soo noqnoqoshada sare leh waa nooc cusub oo ah qalabka kuleylinta induction, oo inta badan loo isticmaalo alxanka tuubooyinka biraha, alxanka aaladaha daawaha, alxanka baararka carbide -ka, alxanka garbaha dheemanka dheemanka, alxanka baalalka miraha marmar, iwm.
Hore: Qalabka Mashiinka Tube -ka Alxanka Birta Mashiinka Mashiinka Mashiinka 400KW induction induction steel alxanka
Xiga: MOSFET Solid -state Qalabka kuleylinta kuleylinta soo noqnoqoshada badan ee tuubada dhexroorka weyn 600KW oo isbarbar socda